Shwe Pyi Aye – Page 12 – ရွှေပြည်ကြီးအေးချမ်းပါစေသား
သံဃာအပါး(4000)သီတင်းသုံးရန်အတွက် သိန်းတစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းပြီး ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ညီအမသုံးယောက်
By JohnSmithPosted on December 23, 2020
သံဃာအပါး(4000)သီတင်းသုံးရန်အတွက် သိန်းတစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းပြီး ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ညီအမသုံးယောက် ညောင်ရွှေမြို့ သာစည်ရပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အပျိုကြီး ညီအစ်မ သုံးယောက် ဒေါ်လှခင်(၉၁) နှစ်၊ဒေါ်လှဌေး(၇၄)နှစ်၊ဒေါ်သန်းဌေး (၇၁)နှစ်တို့က ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆာဆောမောင်ရဲ့ အတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်၏ မြေးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁၉၁၃ ခုနှစ်ကတဲကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၅ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပေ ၁၅၀ ပတ်လည်လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့ သိန်းတစ်သောင်းကျော်ကာလတန်ဘိုးရှိတဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ခြံဝင်းးကြီးကို စေတနာသုံးတန်ပြတ်သားစွာလှူခဲ့ကြပြီတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ စာပြန်ပွဲတော်ကြီးအတွက် နှစ်စဉ် သံဃာအပါးလေးထောင်နီးပါး သီတင်းသုံးရန်.အလို့ငှါ ဓမ္မာရုံအဖြစ် သံဃိက ဒါန ရေစက်ချလှူ ဒါန်းခဲ့တာပါတဲ့။
ဒီနေ့ ကျမနဲ့သူငယ်ချင်းများက ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာမကြီးဒေါ်လှဌေးကို ဝါကျွတ်ဦး အမှတ်တရ သွားကန်တော့ကြရင်းလှိုက်လှဲဝမ်းသာလွန်းစွာ သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာမကြီးတို့ကိုလဲ အများသူငါ သာဓုခေါ်စေဘို့ ဒီပို့စ်လေးရေးခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းလို့ ဆရာမကြီးတို့က ၃၁ ဘုံ သားတို့အတွက် ကုသိုလ်အမျှပေးပါသတဲ့။ဒီ ကြီးမြတ်သော ကုသိုလ်အတွက် မုဒိတာပွား သာဓုခေါ်နိုင်ကြစေဘို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..ရှင့်။
မျက်မမြင်မိဘတွေအတွက် မျက်စိတစ်စုံဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်
မျက်မမြင်မိဘတွေအတွက် မျက်စိတစ်စုံဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တိုင်းက အပြစ်ကင်းစင်လွန်းလှပြီး ရှက် ၊ ကြောက် ရမဲ့အရာမျိုးတွေကို မသိတတ်သေးပါဘူး ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကလေးငယ်မှာတော့ social media ပေါ်မှာ အတော်လေးရေပန်းစားနေပြီး ၊ မိဘတွေက ကလေးငယ်ကို ကြိုးငယ်လေးနဲ့ ချည်နှောင်ထားတာပါ ။ လူအများရဲ့ပြောပြချက်အရ ကလေးငယ်ဟာ မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကို လမ်းပြပေးနေခဲ့တဲ့ မျက်စိတစ်စုံဖြစ်နေပေးခဲ့တာပါ ။ ‘ မိဘတွေက သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုချည်ထားပေမဲ့ ကလေးငယ်က ပြုံးပျော်နေဆဲပါပဲ ၊ ကလေးငယ်ကို ဘုရားသခင်က ကောင်းချီးပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ‘ ဆိုပြီး မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ကလေးငယ်က အရမ်းငယ်နေသေးတော့ မိဘတွေကို ကူညီပေးနေမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် သိပုံမရပါဘူး ။သူတို့ရဲ့မိသားစုလေးက တွေ့မြင်နေရတဲ့သူတွေကို တကယ့်ကို ရင်ထဲထိရှစေတဲ့ ခံစားမျိုးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ။
မြင့်မြတ်ရဲ့ အဖေနဲ့ရောအမေနဲ့ပါ ရင်းနှီးတာကြောင့် သူတို့မိသားစုအကြောင်းကို သေချာသိပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အမှန်ကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ မင်းသားချောမြင့်မြတ်ကတော့ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာကြီးတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေးမြင့်မြတ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ အနည်းငယ်ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပြီး အနုပညာရှင်တွေများစွာက သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်အမှန်ကို ဝေဖန်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေသိအောင် သေသေချာချာလေးရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ လမင်းကဗျာတစ်ယောက် မြင့်မြတ်ရဲ့ အဖေနဲ့ရောအမေနဲ့ပါရင်းနှီးတဲ့အပြင် သူတို့မိသားစုအကြောင်းကိုပါသေသေချာချာသိတာပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အမှန်ကို ဖွင့်ဟပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူမကတော့ ” ကျွန်မတို့အကိုက စိတ်ထားအရမ်းဖြူတဲ့ သူပါ သူ့အဖေ သူ့အမေနဲ့လဲ ခင်ပါတယ် ဟိုးးးတုန်းထဲက သူတို့အကြောင်းတွေ သိပါတယ်ရှင့် ကိုမြင့်မြတ်မှာ အဲ့လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးမရှိပါဘူး သူစိမ်းတွေ အပေါ်မှာတောင်အရမ်းကောင်းတဲ့ သူပါရှင့် သူ့အပေါ်မှာ အထင်မလွဲကြပါနဲ့ နော် ဖိုက်တင်းကိုကြီးရေပီးတော့ အကိုက ဂိမ်းအရမ်းဆော့တာ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ဂိမ်းကိုကိုတွေ သိတယ်ဟုတ် “ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Swelsone News
By JohnSmithPosted on December 22, 2020 December 22, 2020
မိန်းမဖြစ်သူက အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့သူနောက်လိုက်သွားလို့ ကလေးနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ခင်ပွန်းသည် သုံးဘီးမောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့မိန်းမကFacebookပေါ်ကလူနဲ့တွေ့ပြီးနောက် သူနဲ့ကလေးကိုထားသွားခဲ့တာကြောင့် ကလေးပါအလုပ်ကိုခေါ်ပြီးသုံးဘီးမောင်းနေရကြောင်းကို Viral4real ကနေသတင်းရရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာသုံးဘီးမောင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ နေပူထဲမှာ နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရပြီး နိုင်ငံရဲ့ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာတွေကိုလည်း ချိန်ညှိရပါတယ်။ မိန်းမကထားသွားပြီးနောက်ပိုင်း ကလေးကိုအလုပ်ခေါ်လာပြီးစောင့်ရှောက်ရတာ ထိုသူ့အနေနဲ့၂ဆပင်ပန်းပါတယ်။အဆိုပါသုံးဘီးမောင်းသမားနာမည်က Rudy လို့အမည်ရပြီး Facebookအသုံးပြုသူ Jane Eguillos က အလုပ်ကြိုးစားလွန်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Rudyကိုသတိပြုမိပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ သူ့ဇာတ်လမ်းကို ဓာတ်ပုံတွေနှင့်တကွဝေမျှဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Rudy ကသူတို့အိမ်ထောင်သက်က၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့သူ့မိန်းမကိုဖုန်းဝယ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူမကFacebook စတင်အသုံးပြုပြီးလိုင်းပေါ်မှာယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံပြီး နောက်ဆုံးမှာထိုယောင်္ကျားနဲ့တွေ့ဖို့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေက အဖေနဲ့သားဖြစ်သူရဲ့သနားစရာဇာတ်လမ်းကိုကြားရတဲ့အခါ စုတ်တသတ်သတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့တီဗီအစီအစဉ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Kapusp Mo, Jessica Soho” ကိုရောက်သွားပါတယ်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူပြောပြချက်အရ Rudyကသုံးဘီးယာဉ်လေးကိုတကယ်တော့သူမပိုင်ပါဘူး။ နေ့တိုင်း ပီဆို၁၅၀ပေးသွင်းရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အုံနာအိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်း နေ့တိုင်း ၂ကီလိုမီတာ (၁မိုင်ကျော်ကျော်)လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ Rudyကိုစားသောက်ကုန်၊နို့နဲ့ကလေးအတွက် ကလေးdiapers တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ကို သုံးဘီးအသစ်လေးတစ်စီးပါ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
THE VOICE MYANMAR ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်
THE VOICE MYANMAR ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ် ဇာတ်သဘင်လောကမှာ မြို့ရွှေမင်းသားချောတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်ထားသလို ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်ကိုတော့ လူကြီး၊ လူငယ်ပရိသတ်တွေအားလုံး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောက တိုးတက်ဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဖိုးချစ်ကမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာကို ကမ္ဘာကပါသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖိုးချစ်က “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်ညီမငယ်.. ဂုဏ်ယူပါတယ်မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာအတွက်ပေါ့…” ဆိုပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် The Voice Myanmar Winner ဆုကြီးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုးကို အားပေးစကားပြောလာပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ The Voice Myanmar Grand Final မှာ “နဂါးနီ” သီချင်းကို မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်းဝိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရင်ထဲက Winner ဆုကို ရရှိသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒိုက်ဦးသူလေး ခင်ရတနာစိုးကို ဒီထက်မက အားပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
By JohnSmithPosted on December 21, 2020
မြင့်မြတ်အကြောင်းမသိပဲ ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေအပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ဇော်ဇော်အောင် ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာနေရာတစ်နေရာရရှိထားပြီး အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်နေရာရရှိထားတဲ့ ဇော်ဇော်အောင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ ပီပြင်ပိုင်နိုင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကား၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို အများအပြားရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိလည်း ရိုက်ကူးနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဇော်အောင်ဟာ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်အ‌တော်များများနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကတော့ ဇော်ဇော်အောင်ဟာ လတ်တလောလူပြောများနေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဇော်ဇော်အောင်ဟာ သူ့ရဲ့Facebookစာမျက်နှာမှာ “မြင့်မြတ်အကြောင်းမသိပဲမထိနဲ့ ရုပ်ရှင်တလောကလုံး မြင့်မြတ်ဘက်မှာရှိတယ်…..” ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ မင်းသားဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်တွေလည်း ခံစားချက်တွေကိုပြောကြားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Swelsone News
ဖခင်ကို ပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီး မြင့်မြတ်ကို ဝေဖန်နေသူတွေ သိရှိစေဖို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ ယုန်လေး သဘာဝမင်းသားလို့ ပရိသတ်တွေ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသားချောမြင့်မြတ်ကတော့ သာယာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကို တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အားကျချစ်ခင်ရတဲ့ သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုလည်း အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကိုလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါနော်။ မြင့်မြတ်ဟာ အနုပညာလောကမှာလည်း နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်အောင်မြင်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။မြင့်မြတ်ကတော့ မိသားစုတွေကို ပရိတ်ရှေ့ချပြတာနည်းပါးလှပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဖခင်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဝမ်းရေးအတွက် taxi မောင်းကာ ဝင်ငွေရှာနေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ သားဖြစ်တဲ့ မင်းသားမြင့်မြတ်အနေနဲ့ သူဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ဖုန်းကိုင်စေချင်တဲ့အကြောင်းကို မီဒီယာမှာ အင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူးနဲ့ ပက်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယုန်လေးကတော့ အခုလိုပဲ အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “အားလုံး ဆန္ဒမစောစေချင်ပါဘူး .လူတိုင်းကို ကူညီနေတဲ့ မြင့်မြတ်စက်အဖွဲ့ က လူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်ရင်တောင် ကူညီတဲ့ မြင့်မြတ် သူ့ အဖေ အမေ အရင်းမောင်နှစ်မ တွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးဖူးဆိုတာဦးနောက် နဲ့ စဉ်းစားပေးကျပါ .လစဉ် ထောင်ပံ့ကြေးမဆိုလိုဖူး .အဖေ အမေ ကိုကန်တော့တာ ဘယ်လောက်ထင်လဲ .မှန်းကြည့်တာထက် ၃ ဆ လောက်ပိုနေရပါမယ် .Covid ကြောင့် ဘယ်လိုခက်ခဲခဲ နော် . တာဝန် မပက်ေစေရဘူးကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိတဲ့ လူတွေ အတွက်လည်း ပြောရဖို့ ခက်ခဲပါတယ် .မိသားစု အရေးဆိုတော့ .မြင့်မြတ် ဆိုတာ နာမည်နဲ့ လောက်အောင်မြင့်မြတ်ပါတယ် .ဘာမှ မသိပဲ မဝေဖန်ပါနဲ့ဦးဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ် . 🙏🙏🙏မနက်ဖြန် ရေးတင်ပါမယ်” ဆိုကာ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။